ivon-toerana voatokana CCO-Covid-19 eny Ivato, omaly tolakandro. Niakatra ho 23 izany izao ny olona voamarina fa mitondra ny otrikaretina ka manaraka fitsaboana eny anivon’ny hôpitaly. Iray amin’izy 23 ihany moa no misy soritr’aretina fa ny 22 ambiny kosa tsy ahitana izany. Izany hoe tsy misy fanaviana sady tsy sempotra. Efa tsy misy atahorana intsony kosa ny fahasalaman’ilay misy soritr’aretina amin’izao, raha toa ka sempotra be izy ny alarobia lasa teo. Lehilahy moa ny telo amin’ireo voamarina fa mitondra indray ity tsimokaretina ity ireo, ary vehivavy mihoatra ny 60 taona kosa ny iray.